DUUFISKA BORIC ACID DHEGAHA: NOOCYADA KAREEMKA, SIFOOYINKA IYO QASAARAHA, IYO SIDOO KALE SIDA LOO ISTICMAALO IYO INTA GOOR EE LA HAYO? - WIXII MARTIDA
Daaweynta cudurada dhegta leh cadaadiska boric acid mar kasta waa la dhaqmaa. Isticmaalka cadaadis leh boric acid ayaa la barbar dhigi karaa jimicsiga jidhka, hase yeeshee, cadaadisku waa mid la heli karo, waana la isticmaali karaa iyada oo aan dhakhtar qorin.
Marka xigta, waxaan kuu sheegi doonnaa nooca dharka caafimaadka, sida loo isticmaalo si sax ah, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada nidaamka. Xaaladahaas waxaa lagama maarmaan ah in laga fogaado faashadaha kulaylka. Maxaa kale ee daaweynta dhagaha la leh daroogada iyo waxa la dooranayo heerkulka sare. Iyo sidoo kale, saamaynta daawada ee daroogada.
Duufaantu waa dhar caafimaad oo lagu dabaqo booska xanuunka. Iyada oo qayb ka mid ah cadaadisku waa inay noqdaan walxo daaweyn firfircoon. Duufaantu waxay yeelan kartaa saamayn kulul iyo qaboojin labadaba. Cadaadiska kuleylka ah waxaa loo isticmaalaa geeddi-socodka bararka, iyo qaboojinta - jabka, murgacashada, dhaawacyada iyo dhaawacyada kale. Dhismaha cadaadisku way kala duwanyihiin, waxayna ku xiran tahay saameynta loo baahan yahay.
Marka la adeegsanayo qaboojinta qaboojinta, waxaa muhiim ah in aan loo baahnayn mawduucyada masiibada, sidaas awgeed, walax qabow ayaa lagu dabaqayaa aagga ay dhibaatadu saameysey muddo gaaban.
Haddii daaweyntu u baahan tahay diirimaad, markaa waxaad isticmaali kartaa kuleylka qoyan iyo qoyaanka qoyan. Xaaladda kowaad, waxaad u baahan tahay inaad abuurto "saameeyaha aqalka dhirta lagu koriyo" oo ku wareegsan goobaha xanuunka, iyo kan labaad - diiriya nudaha iyo ka hortagga gubashada. Cadaadiska qoyan waxaa lagu daboolayaa polyetylen ka dibna maro, iyo ilka kuleylka qallalan waxaa lagu duuduubay dhowr lakab oo maro ah ka hor intaan lagu daboolin dhibta xanuun.
Muuqaalka muuqaalku wuxuu ku xiran yahay meesha lagu dabaqo. Waxay caadi ahaan u egtahay sida caadiga ah, laakiin faashad adag oo adag.
Waa muhiim! Xaalad kasta ha noqotee, waa in cadaadiska la saaro in la isticmaalo haddii cudurku uu weheliyo qandho sare. Heat waxuu ku kordhiyaa kororka heerkulka.
Cadaadiska qalalan waxaa loo isticmaalaa haddii aysan jirin xanuunka kaliya ee dhegta, laakiin sidoo kale dheecaan. Duufaantu waxay diirisaa xubnaha jirka saameysa waxayna soo saartaa qarsoodi. Dharka engegan wuxuu ka ilaaliyaa dhegta boodhka iyo saameynaha kale ee deegaanka.
Waxaa loo baahan yahay cadaadis qoyan si loo isticmaalo walaxyo firfircoon oo kala duwan oo ku dheggan dhegta. Kuwani waa boric acid, khamriga, vodka, saliida camphor, dabeecada dhirta iyo walxaha kale ee daawooyinka.
Isticmaalka khamriga qoyaanka lama isticmaali karo maqaarka dhaawacmay iyo maqaarka.
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka isticmaalka
Ka hor inta aanad codsanin waxaad u baahan tahay inaad barato naftaada iyo qadarinta nidaamka. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka:
Kharash yar oo daaweyn ah.
Faa'iidooyinka ay ka kooban tahay qaybaha shaqsiyadeed iyo walxaha firfircoon.
Cabbirada alkolada laguma taliyo carruurta.
Haddii aalkolo aan si haboon loo qasi karin biyo, waxaa suurtagal ah in la helo unugyo guban goobta goobta cadaadiska.
Xaqiiqada saxda ah ee ku xeeldheer iyo walxo firfircoon, iyo sidoo kale codsi karti leh oo taxaddar leh ee dhaymada ayaa dayacday dhammaan cilladaha.
Maxay ka duwan tahay habka turundochka iyo habka qaboojinta?
Waxaa suurtagal ah in lagu daaweeyo dheg dheg xanuun aan ahayn oo kaliya fara badan, laakiin sidoo kale leh boric acid acid, kaas oo si toos ah loogu dhejiyo dhegta xanuunta. Boric acid ma aha mid wax ku ool ah marka la damqado. Waa maxay farqiga u dhexeeya hababka daaweynta marka la barbardhigo isticmaalka kombuyuutarka?
Turundochka - Tani waa furaha yar ee suufka, kaas oo si sahlan loogu samayn karo guriga. Waxaa la marsiiyey boric acid, dharbaaxo, ka saarto xad-dhaafka, oo dhegeyso dhegta xanuun, si tartiib ah u riixaya, oo ku daboolaya suufka sare. Ka hor intaadan isticmaalin goobaha, dhegta waa in la nadiifiyaa sulfur. Boric acid ayaa kulaylka maqaarka ka soo baxa, halka suuf suufku ka soo nuugo qoyaan xad dhaaf ah dhegta, ka hortagga bakteeriyada soo kabashada.
Duufiska Boric acid - Nidaamkani waa sida ugu dhaqsaha badan sida isticmaalka turundochka. 3-4 dhibcood oo ah boric acid kulul ayaa lagu qaboojiyey dhegta ka hor-nadiifta ah iyo daboolida dhegta dhagta ee suufka. Waxaa lagula talinayaa inaad sameysid ilaa 4 abaydin maalin kasta.
Dareen u yeelo! Laguma dhajin karo dhegta hargab qabow oo boric acid ah, tani waxay keeni doontaa xanuun badan.
Ma jiro farqi u dhexeeya labadan hab oo ay u adeegsanayaan cadaadis, sababtoo ah hal maaddo firfircoon ayaa ku lug leh daaweynta. Turundochki iyo instillation ma laha saameyn kulul oo cad sida, cadaadis, waana kuwo ka hortagaya carruurta. Laakiin dadka qaangaarka ah, isticmaalka turundas iyo kicinta mararka qaarkood xaaladaha qaarkood way sahlanaanayaan oo ka dhaqso badan yihiin marka la adeegsanayo cadaadis.
Haddii aad dooratid hab daaweyn ah waxaa jira shaki, markaa waxaa habboon in aad xusuusatid waxyaalaha ka hor imaanaya ama tan nidaamkaas. Duufaantu waxay ka hortagaan heerkulka sarreeya iyo bararka nadiifka ah, barxadda iyo qaboojinta - xilliga uurka iyo nuujinta, carruurnimada, iyo sidoo kale dhaawacyada xuubka. Waxaad u baahan tahay inaad ku dhisto gobolkaaga iyo astaamaha jirka marka aad dooranayso hab daaweyn.
Marka qalabyada lama ogola?
Waxaa jira xaalado bukaan ah oo loo isticmaalo kululaynta kululaynta dhegta gabi ahaanba lama aqbali karo. Haddii bukaanku leeyahay:
dheecaanka dhegta ayaa la arkay;
maqaarka ayaa waxyeelo, dermatitis ama furunculosis la arkay;
Isku-duwidda iyo jihayn-la'aanta meel bannaan.
Cabbitaanka kuleylka aan loo isticmaali karin kiis kasta, waxa uu ku jiraa dhibaatooyin halis ah. Haddii aad ku ridayso kuleylka bukaan-socodka oo leh otomansiifka, kadibna barar nadiif ah oo hoos yimaadda saameynta heerkulka sarreeya waxay aadi doontaa minineynta.
Sidee loo dalbadaa: talaabo talaabo talaabo ah
Si habboon u codso kuleylka kulaylka dhegta, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso qalabka soo socda:
Qodobbada lagu duubay dhowr lakab si leydi ah 10x6 cm waa la helayaa, faashad, faashad ama dhar kasta oo suuf ah ayaa sameyn doona. Dhexdhexaadinta laydhka waxaad u baahan tahay inaad jarayso qayb yar oo dhererka dhegta ah.
Qeyb ka mid ah polyetylen, cabirka yar yar. Sidoo kale waa lagama maarmaan in la gooyo.
Qayb ka mid ah dhogor si loo daboolo labadan lakab. Miisaanka dhogorta waa inuu ahaado 2-3 cm.
Faashado ama faashad caadi ah ama faashad fara badan oo lagu xiro.
Qoraalka. Wixii burin ah ee kombuyuutarka, xal khamri ah oo boric acid ah ayaa loo isticmaalaa, taas oo la barbardhigo biyo si aan loo helin gubasho, gaar ahaan haddii cadaadiska loo dhigay waqti dheer. Saadaashu waa 1: 1, carruurta - 1: 3.
Ka hor intaan la isticmaalin xalka, waxaa lagama maarmaan ah in la diiriyo yar yar, qoyo maro ama faashad la socota, ka dibna ka tuujin xad-dhaafka si aan xalku uga soo baxin faashadda.
Si aad u dalbato farsamo, waxaad u baahan tahay:
Ka saar timaha dhagta, ka saar dhamaan dahabka.
Ku rid maro qoyan oo leh xal boric acid on dhegta xun.
Laga soo bilaabo korka si aad u soo rogto gabal polylene. Haddii qaybo ka mid ah cadaadiska ay aad u weyn yihiin wejiga bukaanka, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u gooyso kharashka.
On top of baahida loo baahan yahay ee polyetylen in ay soo rogaan lakabka ah suuf, iyo hagaajin faashadda.
Dufcadda waxaad ku xiran kartaa maro si aad u wanaajisid saameynta iyo xoojinta saxda ah ee dharka.
Cadaadiska waxaa la qabtaa ilaa iyo inta uu dareemayo kuleylka quruxda badan ee la ilaaliyo adigoon dareemeynin gubasho. Xakamaynta qoyaanka laguma talinayo in laga baxo habeenkii, laakiin cadaadis qalalan ayaa suurtagal ah, gaar ahaan ka dib markii laga saaray qoyan.
Inkasta oo ay ku jirto dhammaan bakteeriyooyinka bakteeriyada iyo anti-bararka, boric acid waa sunta qiyaasaha badan. Marka la codsanayo, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo qiyaasta iyo calaamadaha, si looga hortago isticmaalka boric acid waa wax aan la aqbali karin.
Xaddiga xad dhaafka ah ee daroogada waa suurtogal, iyo calaamadaha soo socda:
maqaarka maqaarka, iyada oo aan jirin sabab kale oo muuqaalkeeda ah;
tufaax of addimada;
muujinta calaamadaha xanuunka kelyaha.
Haddii aad leedahay astaamo badan oo ah boric acid, waxaad u baahan tahay inaad wacdo ambulansi, sababtoo ah ma jirto wax daaweyn ah oo gaar ah, qiyaasta xad dhaafka ah waxaa loola dhaqmaa guud ahaan sumoobidda jirka. Dhakhtar kaliya ayaa go'aamin kara darnaanta xaaladda, sababtoo ah mararka qaarkood dhiig ayaa lagu shubaa.
Boric acid waa daaweyn waxtar leh cudurada dhegta. Waxaa muhiim ah in la raaco tilmaamaha markaad guriga ku dabaqi kartid adiga oo aan la tashan dhakhtar. Haddii qalabku uusan lahayn saameynta la rabo ka dib markii uu codsanayo 3-5 maalmood, waa lagama maarmaan in la arko dhakhtar.